Sanduuqa daryeelka maqaarka ee maqaarka waxaa lagu ridayaa sanduuqa nooca buuga ee PVC soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Huaguang
Musqusha Hadiyad Sanduuqa
Sanduuqa warqadda ee daryeelka maqaarka waxaa lagu dhejiyaa sanduuqa nooca buugga PVC
Sanduuqa Daryeelka Maqaarka
Cabir: 28 * 17 * 7cm
Nooca Waraaqaha: Waraaqaha
Faahfaahinta Baakadaha: hal kombiyuutar oo ku jira polybag ama shuruudahaaga
Dekedda: Xiamen / Fuzhou
Tirada (Khaanadaha) 1 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Waqti (maalmo) 15 20 In lagu gorgortamo
Horumarinta iyo cusbooneysiinta tiknoolajiyada iyo qalabka, habka wax soo saarka ee baakadka sanduuqa hadiyadaha ayaa si fiican u bartay shirkado badan. Adeegsiga tikniyoolajiyad cusub ayaa si weyn u wanaajiyey waxsoosaarka wax soo saarka, qalab cusubna si tartiib tartiib ah ayuu u beddelay hawlgalkii gacan yaraa ee daallanaa. Kordhinta softiweerka iyo qalabka qalabka ayaa kor u qaaday tayada wax soo saarka.
Nooca sanduuqa hadiyadaha noocyadiisa kala duwan, laga soo bilaabo qaab-dhismeedka kor iyo hoosba oo isku jira dabool iyo foomka daboolka salka, kuna duugan iskudarka sanduuqa kartoonka, waxaa jira furitaanka iyo xirida nooca albaabka, nooca isku-darka dahaarka buugga, Qaab dhismeedka aasaasiga ah ee sanaadiiqda hadiyadaha, noocyadan qaabdhismeedka qaabdhismeedka aasaasiga ah, naqshadeeyayaasha ayaa abuuray kaleidoscope nooca sanduuqa ah, illaa xirxirida alaabta la saaray magaca qabow. Maanta iyada oo loo marayo sanduuqa nooca buugga daryeelka maqaarka ah si aan kuugu soo bandhigo nooca sanduuqa adiga:
1. Sanduuqa nooca buugga: wuxuu ka kooban yahay qolof ka baxsan iyo sanduuq gudaha ah. Giraanta qolofta gudaha waxay ku wareegsan tahay sanduuqa gudaha, hoose ee sanduuqa gudahana wuxuu ku dheggan yahay gidaarka dambe.Sida sanduuqa nooca warqadda ee daryeelka maqaarka oo kale ah. (fiiri sawirka)
2. Sanduuqa daboolka iyo salka: wuxuu ka kooban yahay sanduuqa daboolka iyo sanduuqa hoose, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa xargaha kore, hoose iyo yar. (fiiri sawirka)
3. sanduuqa albaabka ouble: wuxuu ka kooban yahay sanduuqa bannaanka bidix iyo kan bidix ee midig, sanduuqa gudihiisa oo ku yaal dhinaca gudaha iyo sanduuqa bannaanka bidix iyo midig oo isu eg. (fiiri sawirka)
4. Sanduuqyada u qaabeysan sida wadnaha: sanduuqyadu waxay u egyihiin sida qalbiyada, badiyaa qaabdhismeedka daboolka iyo sanduuqyada daboolka salka. (fiiri sawirka)
5. Sanduuqa daboolka oo leh gees iyo hoose: Sanduuqa daboolka wuxuu ka kooban yahay sanduuqa daboolka iyo sanduuqa hoose. Sanduuqa daboolka iyo sanduuqa hoose waxay leeyihiin cabir isku mid ah. (fiiri sawirka)
6. Sanduuqa khaanadda: waa sanduuq ay ku shaqeyso khaanad. Waa la soo bixi karaa oo si fudud ayaa loo furi karaa marka la isticmaalayo. (fiiri sawirka)
7. Sanduuqa hargaha: sanduuq madhan oo ka samaysan loox cufan lehna wax PU ah oo lagu dhejiyay banaanka, oo u eg sanduuq maqaar ah. (fiiri sawirka)
8. Sanduuqa Wareega: Qaabka sanduuqa waa mid wareegsan ama qorrax leh, badankooduna waxay leeyihiin qaabdhismeedka daboolka iyo sanduuqa daboolka salka. (fiiri sawirka)
9. Sanduuqa laba-geesle / octagonal / polygonal: sanduuqa waa qaab laba-geesleyaal ah wuxuuna u badan yahay qaab dhismeedka daboolka iyo daboolka salka. (fiiri sawirka)
10. Sanduuqa daaqadda ka furaya: hal ama in ka badan oo sanduuqa ah waa in la furaa, oo PET hufan iyo qalab kale waa in lagu dhajiyaa dhinaca gudaha, si si buuxda loogu soo bandhigo macluumaadka ku jira. (fiiri sawirka)
11. Sanduuqa alwaaxda saafiga ah: sanaadiiq ka samaysan alwaax adag oo saafi ah, oo dushiisa inta badan lagu rinjiyey rinjiga, iyo sanduuqyada qaar oo ka samaysan alwaax saafi ah oo aan midabayn (fiiri sawirka)
12. Sanduuqa isku laabma: saxanka cawlan oo ah qalfoof, warqad farshaxan leh warqad dahaadhan ama warqad kale, oo foorarsanaya saxanka cawlan si uu uga tago meel fog oo gaar ah, markii loo isticmaali jiray in lagu wada taageero dhammaan qaab saddex-geesood ah, waxaad si xor ah isugu laaban kartaa. (fiiri sawirka)
13. Sanduuqa Flip: waa isku darka daboolka iyo sanduuqa daboolka salka iyo geli daboolka geeska iyo sanduuqa daboolka salka. Farqiga ayaa ah in sanduuqa gadaashiisa lagu dhajiyay warqad waraaq ah, taas oo si xor ah dib iyo gadaal loogu rogi karo. (fiiri sawirka)
Hore: Logo Gawaarida Daabacan Sanduuqyada Hadiyadaha Kartoonada Jumlada ah oo leh Ribbon
Xiga: Midabka daabacaadda logo logo Custom 350g warqad card cad sanduuqa dibadda
Sanduuqa Kaydinta Waraaqaha
La xiriira ALAABADA
Custom Custom Handmade Paper Paper Jewelry Box O ...
Warqad jiingado Simple shaaha baakadaha shaaha nacnac ...
sanduuqa daryeelka maqaarka oo leh warqad daboolka ah oo baako hadiyad ah ...
Calaamada Custom Box Handxade Paper Jewelry Box
Tayo sare leh sanduuqa saloolka popcorn caadadii la tuuri karo / koob / ...
Kartoon Logo Daabacan Qurxinta Qurxinta Gaarka ah ...
TALADA LACAG LA'AAN 0086-18850140115
CINWAAN Dhismaha 4, Maya 20, Wadada Zhaoyu, Magaalada Gaishan, Fuzhou, Fujian, Shiinaha
Midabka daabacaadda logo logo Custom 350g warqad card cad sanduuqa dibadda
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2023: Dhammaan xuquuq dhowran.